Alatsinainy 18 Martsa 2019. – FJKM
Alatsinainy 18 Martsa 2019.
Fandalinana ny Boky 1 Mpanjaka
1 Mpanjaka 14.1-20
Singanintsika amin’izay novakintsika ireto :
1- Tsy manova ny maha-mpaminanin’ny Tompo azy ny fahantran’ny mpanompony.
Tsy hanontany isika hanao hoe: nahoana re i Ahia mpaminany no dia pahina ny masony noho ny fahantrany » (and4). Fa izao :tsy niova ny maha-mpaminany marina azy . Fampaherezana ny mpitory ny Filazantsara mety hahita fahantrana izany . Aza miova fa torio marina ihany ny Tenin’ny Tompo.
2-Tsy miova mihitsy ny fepetran’ Andriamanitra .
Nanota i Solomona tany aloha dia naniraka niteny azy ny tompo ; izao indray : nanota i Jeroboama dia naniraka olona hiteny azy mafy koa ny Tompo. Mahamenatra fa tsy miova amin’ny fahamarinana takiny ny Tompo ary tsy miova amin’ny fahamafim-pony koa na dia ny olona notahiany sy nasiany soa manokana aza.
3-Nalain’ Andriamanitra ilay zaza tsara tao anaty fanakaviana ratsy . Mampieritreritra lalina ny filazana momba an’i Abia, zanak’i Jeroboama manao hoe: « amin’ny tamingan’i Jeroboama dia izy irery ihany no ho tonga ao am-pasana , satria izy ihany no nahitana fahatsaram-panahy ny amin’i Jehovah, Andriamanitry ny Israely » (and13) .Hay ve misy olona tsara alain’ny Tompo noho ny fahatsarany e!
« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha- 3